Nosakanan’i Shina Ilay Horonantsari-mihetsika Fohy Avy Ao Hong Kong · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Avrily 2014 11:52 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Deutsch, Français, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Nanjary malaza tao amin'ny aterineto sy niteraka fahatezerana teo amin'ireo Shinoa mpanao sivana ilay horonan-tsarimihetsika fohy tantaran'ny hoavy noforonina mitondra ny lohateny hoe ” Ho Rava Afaka 33 taona i Hong Kong “.
Nahasarika mpijery 645 000 ilay lahatsary maharitra fito minitra sy 28 segondra nanomboka tamin'ny nampidirana azy tao amin'ny Youtube ny 3 Martsa 2014, izay mampivoitra ny fahalemen'ny mponin'i Hong Kong, izay tsy taitra manoloana ny firimorimon'ilay meterorita fantatra fa hidofotra amin'ny taona 2047 -taona izay hitsaharan'i Hong Kong hanana lalàna miavaka amin'ny Tanibe, amin'ny maha-faritra manokana ara-pitantanana azy.
Ao amin'ny horonantsary, maherin'ny roa ampahatelon'ny mponina sy orinasa goavana no niala ny faritra rehefa nandre ilay vaovao momba ny meteorita. Niroborobo ireo orinasa madinika ary malalaka ny trano hoan'ny tsirairay ny vokatr'izany fandaozana izany. Teraka indray ny tanàndehibe, amin'ny lafiny iray na dia eo aza ny loza mitatao aminy. Nahavita namotika ilay meteorita ihany ireo mpahay siansa tamin'ny farany.
Asehon'ny horonantsarimihetsika ny ahiahin'ny mponin'i Hong kong manoloana ny olana ara-politika sy ara-tsosialy, tahaka ny fitomboan'ny mponina sy ny materialisma ary ny fitomboan'ny isan'ireo Shinoan'ny Tanibe izay miori-ponenena ao hatramin'ny namindrana ny fintantanana azy avy amin'i Fanjakana Britanika mankany amin'i Shina tamin'ny taona 1997. Maneho hafatra mifanohitra amin'ny fijerin'ny besinimaro eo amin'ireo Shinoan'ny tanibe ny horonantsarimihetsika, fa raha tsy misy ny fanohanana ara-toekarena avy amin'i Shina, dia efa ela i Hong Kong no maty tanteraka.
Mpiserasera iray, “iseeyouinmyheart,” naneho hevitra tao amin'ny Youtube:
Ho ahy, efa vita ny amin'i Hong Kong. Tsy mahatsiaro izany hoe fahalalahana, rariny, fanajana lalàna ary fahamarinana izay niainako talohan'ny taona 1997 izany intsony aho.
Tsy azo nosorohina fa voasakana ilay horonantsary fohy tao amin'ny habaka Shinoa tahaka ny Youku. Araka ny filazan'ny bilaogy Fei Chang Dao, dia voafafa tao amin'ny Baidu sy ny Sina Weibo ny vokatra amin'ny fitadiavana ny voambolana “33 taona ”. Araka ny nambaran'ny China Digital Times dia tafaporitsaka tao amin'ny aterineto ny baikon'ny manampahefana Shinoa:
Pikantsary tao amin'ilay horonantsary fohy “Ho rava i Hong Kong Afaka 33 taona”
Biraon'ny Vaomieram-Panjakana momba ny Fampahafantaram-baovao: Esory avy hatrany ao amin'ny habaka rehetra ireto manaraka ireto: (1) Vaovao mifandraika amin'ny “fanohanana sy famonjena an'i Tang Jitian sy ireo mpisolovava hafa nanjavona”; (2) lahatsary, lahatsoratra, sns izay miaro ilay horonantsarimihetsika fohy tantaran'ny hoavy noforonina momba ny mponina ao Hong Kong “mifamonjy izy ireo” mitondra ny lohateny hoe “Ho rava i Hong Kong afaka 33 taona”.
Nilaza tamin'ny The Diplomat mikasika ny hevitr'izy ireo mahatonga ny fanakanana ilay lahatsary tao amin'ny Tanibe i Yik Kan Cheung, mpahay momba ny fikirakirana manokana ny sary (na “effets speciaux”) sady mpanara-maso ny aorian'ny famokarana ilay horonantsary:
Mino izahay fa ny antony nandraràn'ireo manampahefana ilay lahatsary dia, satria mihevitra izy ireo fa hampilamina ny fiarahamonina ny zavatra ataon'izy ireo. Saingy, izahay mihevitra fa ny hanalavirana ny olona tsy hahalala ny marina no tena antony nanakanana azy, fa miezaka manempotra mafy an'i Hong Kong i Shina amin'ny alalan'ny fanondranana Shinoan'ny Tanibe hiori-ponenana ao Hong Kong mba haha-maro isa azy ireo ao ary hifehy ny fifidianana. Aorian'izany, tsy hisy fifidianana madio sy malalaka intsony ao Hong Kong.